Lacagaha Xawilaadda Lacagta Elektronka ah
Sanduuqa McKnight Endowment Fund ee Neuroscience wuxuu isticmaalaa habka lacag bixinta elektarooniga ah. Nidaamkani waxa uu noo ogolaanayaa in aan si dhaqso ah iyo ammaan ah ugu wareejino mushaarkeena. Lacagta maaliyadeed waxaa lagu sameeyaa Guriga Aaladda (ACH), oo ah shabakad amaan ah oo isku xirta dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee Maraykanka. Shabakadda ACH waxay u dhaqantaa sidii xarun dhexe oo wax lagu nadiifiyo dhamaan macaamiisha wareejinta maalgalinta ee Maraykanka (EFT), sida lacagta tooska ah, lacagaha elektarooniga ah, iyo bixinta kaadhka debitka.
Si aad u qorto nidaamka lacag bixinta cusub, fadlan buuxi Heshiiska Oggolaanshaha Lacag-bixinta ee Aaladda (ACH) ee hoos ku qoran. Waxaad foomka u diri kartaa dukumeentiga xisaabxirka ee Xafiiska Hantidhawrka Dakhliga (Endowment Fund). Haddii aad doorbideyso, waxaad foomka oo dhammeystiran u diri kartaa dukumiintiga lacagta lagu bixiyo (612) 332-3833.
Adigoo gudbiya xogtan, waxaad ogolaatay inaad u oggolaato Sanduuqa Maaliyadda ee McKnight Fund for Neuroscience si aad u bixiso lacagtaada si elektaroonik ah. Haddii talooyinka bangigaaga isbeddelayo wakhti kasta, fadlan hubi inaad noo sheegto. Fadlan hubso in macluumaadka bangigaaga la ilaalin doono loona haysto meel amaan ah.
Su'aalaha ku saabsan lacagaha elektaroonigga ah, fadlan tixraac Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo (FAQ) hoosta. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama faallooyin dheeraad ah, fadlan toos ula xiriir Mas'uuliyadda McKnight Foundation, Therese Casey, oo toos ah accounting@mcknight.org.
Dukumentiyada Muhiimka ah
Heshiiska ruqsadda ee keydinta tooska ah
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo ee ku saabsan Xawilaadda Caymiska Elektronik
Machadka McKnight wuxuu kaliya u baahan yahay miisaaniyadda abaalmarinta aqoonyahanka iyo codsadayaasha loo doortay in ay soo gudbiyaan soo jeedin buuxda ee Abaalmarinta Cudurrada Cilmiga / Cognitive iyo Innovations in Technology Awards. Markaad soo gudbiso miisaaniyadda, fadlan raac tilmaamaha hoose. Waxaad kaloo fiirin kartaa miisaaniyada tusaalaha ee kuxiran boggan.
Wixii Abaalmarinta MCD
Fadlan muuji qaybaha waaweyn, oo ay ku jiraan kharashyada aan tooska ahayn ee ilaa boqolkiiba 10 ee abaalmarinta (gunnada kharashka aan tooska ahayn waxaa lagu daraa abaalmarinta $ 300,000)
Fadlan xaddid "lacagaha kale" ilaa 15% miisaaniyadda (jebinta khadadka kale ee miisaaniyadda)
Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa hawlo kala duwan oo cilmi baaris ah, laakiin ma aha mushaarka qofka qaata
Fadlan ku dar miisaaniyad sanad walba ee abaalmarinta, ie Febraayo 1, 2018 - Janaayo 31, 2019; Febraayo 1, 2019 - Janaayo 31, 2020; iyo Febraayo 1, 2020 - Janaayo 31, 2021.
Fadlan tusi qaybaha waaweyn, oo ay ku jiraan kharashyada aan tooska ahayn ee boqolkiiba 10 ee abaalmarinta (gunnada kharashka aan tooska ahayn waxaa lagu daraa deeqda $ 200,000)
Fadlan ku dar miisaaniyad sanadka sanad walba, sida: Ogost 1, 2018 - Luulyo 31, 2019; iyo Agoosto 1, 2019 - Julaay 31, 2020.
Fadlan tusi qaybaha waaweyn, sida mushaarka, qalabka, sahayda, iwm.
Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa hawlo kala duwan oo cilmi baaris ah, laakiin maaha inay ku jiraan kharashyada ama kharashyada aan tooska ahayn
Fadlan ku dar miisaaniyad sannad kasta ee abaalmarinta, ie July 1, 2018 - Juun 30, 2019; Julaay 1, 2019 - Juun 30, 2020; iyo July 1, 2020 - Juun 30, 2021
Tusaale Miisaaniyadda Aqoonta
Tusaalaha Tababarka / Miisaaniyada Dhameystirka Dhibcaha
Foomka Canshuurta 990-PF